Fashion – Page6– OOTDMYANMAR
HOW TO STYLE THE “IT DRESS”: ODINE RUFFLED IN LAVENDER
No Comments on HOW TO STYLE THE “IT DRESS”: ODINE RUFFLED IN LAVENDER
“IT DRESS” Odine Ruffled ခရမ်းနုရောင် ကို ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ကြမလဲ
What would summer be withoutadress, right? But if you haven’t seen the perfect dress yet — we’ve got you covered! The Odine Ruffled dress in Lavender undeniably isamust this summer.
ဝတ်စုံလှလှလေးတစ်စုံမရှိဘဲနဲ့တော့ နွေရာသီ က မပြည့်စုံနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဝတ်စုံလှလှလေး မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ OOTD က ပြောပြပေးမယ်နော်။ Odine Ruffled ရဲ့ ခရမ်းနုရောင်ဝတ်စုံလေးက နွေရာသီအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
If you aren’t convinced yet here are ways you could style this dress:
ဝယ်သင့်မဝယ်သင့်စဉ်းစားနေတုန်းဆိုရင်တော့ ဒီဝတ်စုံနဲ့ ဘယ်လိုစတိုင်ထုတ်ရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Withawhite heels. Nothing complicated.
အဖ​ြူရောင် ဒေါက်ဖိနပ် ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်မဖြစ်ဘူး။
Photo credits @mdsmyanmar
2. Oversized sunnies + Statement earrings. BRB beach is calling me.
နေကာမျက်မှန်ခပ်ကြီးကြီး + နားကပ်အကြီးတစ်စုံ BRB ကမ်းခြေရဲ့ခေါ်သံကိုကြားနေရပြီ။
Photo credits @eiei2927
3. With minimal jewelries. The simple the better, right?
ရိုးရှင်းတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာတွေ အရိုးရှင်းဆုံးက အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်?
Photo credits @shmyint
4. A matching clutch and shoes Great for wedding days.
လက်ကိုင်အိတ်နဲ့ ဖိနပ်ဝမ်းဆက် မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Photo credits @tokki.yupar
5. Strappy heels. Best way to mirror your outfit and shoes.
Photo credits @thet_diary
6. Withadesigner bag Bring out the classy in you.
ဒီဇိုင်နာထုတ်လက်ကိုင်အိတ်တွေ ကိုယ့်ရဲ့ဖက်ရှင်အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်။
Photo credits @khinethitlwin
This dress is just 59,000 KS.
ဝတ်စုံကတော့ မြန်မာကျပ် ၅၉၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
By the way, MDS Myanmar is having their sale now until April 19. It’s 25%off NATIONWIDE!!!! You heard it right. What are you waiting for?
ဒါနဲ့ စကားမစပ် MDS Myanmar က ဒီနေ့ကနေစပြီး April 19 အထိ လျှော့စျေးတွေပေးနေပါပြီ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ 25% discount နော်။ ကဲ.. ဘာတွေစောင့်နေဉီးမှာလဲ။
To be safer they are also doing, free delivery nationwide til end of April.
Tags Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar, review
FASHIONISTA OF THE WEEK: LASHU JAMONE
No Comments on FASHIONISTA OF THE WEEK: LASHU JAMONE
LASHU JAMONE isapresenter who loves fashion. Make sure to watch this short video to know more about her:
Jamone ကတော့ ဖက်ရှက်ကျကျနေရတာကို သဘောကျတဲ့ presenter တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းတွေ ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Tags Fashion, LASHUJAMONE, ootdmyanmar, video, youtube
FASHIONISTA OF THE WEEK: AUNG MYINT MO
No Comments on FASHIONISTA OF THE WEEK: AUNG MYINT MO
Aung Myint Mo isastudent and an aspiring model. Get to know about his love for street fashion and his favorite brands in this video:
Aung Myint Mo က တော့ ကျောင်းတက်ရင်း model တဖြစ်လည်း ဖက်ရှင်လောကမှာ လျှောက်လှမ်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ သူနှစ်သက်တဲ့ street fashion နဲ့ အကြိုက်ဆုံး brand တွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။
Tags ootdmyanmar, ootdmyanmarguy, video, youtube
5 DESIGNER TUMBLERS & BOTTLE HOLDERS TO DRINK FROM IN STYLE
No Comments on5DESIGNER TUMBLERS & BOTTLE HOLDERS TO DRINK FROM IN STYLE
စတိုင်ကျတဲ့ ဒီဇိုင်နာ tumblers နဲ့ bottle holders ငါးမျိုး
As the corona virus increases we have to follow precautionary measures to stay healthy. And withoutadoubt hydrating your self with water is one way to fight this disease. But, what if you are not fond of drinking water? Well, we have designer tumblers and bottle holders that can increase your appetite to drink water —in style.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ ပျံနှံမှုနှုန်းကမြင့်တက်လာတာနဲ့အညီ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ သတိထားကာကွယ်ရမယ့် အချက်တွေကိုလည်း လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်နေထိုင်တာက ရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဆိုတာတော့ ငြင်းစရာမရှိမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ရေခဏခဏသောက်ရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရော။ မပူပါနဲ့ ရေသောက်တဲ့အကျင့်လေးကို စွဲမြဲသွားစေဖို့ စတိုင်ကျတဲ့ ဒီဇိုင်နာ tumblers နဲ့ bottle holders လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Flask Bag, US$5551 , CHANEL, chanel.com
Insulated tumbler, US$85, PRADA, prada.com
Mini bottle holder, US$700, BALENCIAGA, balenciaga.com
Damier Azur bottle carrier, US$1400 LOUIS VUITTON, louisvuitton.com
Sigg bottle, €55 SAINT LAURENT, ysl.com
Article from preview.com and minor revisions were made.
Tags chanel, Fashion, lv, tumblers
No Comments on HOW TO BE A GIRL BOSS
အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းရည် : စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့
Invest inaPower Suit. (စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့ဝတ်စုံတစ်စုံအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။)
Beingagirl boss is about working. If you’re doing an amazing job, why not look amazing while you’re at it? Investing inapower suit that make you feel confidents isamust.
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ အလုပ်လုပ်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်က အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကလည်း ဘာကြောင့် အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်မနေရမှာလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိစေတဲ့ ဝတ်စုံတစ်စုံရှိထားဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Photo credits to @shmyint @mdsmyanmar @khinethitlwin
Hit the Gym! (Gym ဆော့ပါ။)
One important rule of beingagirl boss is staying healthy!
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့ ကျန်းမာစွာနေထိုင်ဖို့ပါ။ Gym ဆော့ခြင်းက သက်လုံကောင်းပြီး အားအင်ပိုတိုးလာစေရုံမက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေလည်း တိုးပွားလာစေပါတယ်။
Photo credits to @hertravelproject
Not only will hitting the gym give you more energy and stamina, but it will help increase your confidence tool!
Educate yourself! Reading will allow you to stimulate your mind and keep it young.
ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာပါ။ စာဖတ်ခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပိုတိုးတက်စေရုံမက အတွေးအခေါ်တွေကို လတ်ဆတ်စေလို့ သင့်ကိုလူငယ်တစ်ယောက်လိုခံစားစေမှာပါ။
Get Your Beauty Sleep! (အလှအပအတွက်အနားယူပါ။)
Getting your beauty rest is extremely important to beingagirl boss. Aim to get 8 hours of sleep every night!
အနားယူခြင်းကလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ညတိုင်း တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီအိပ်စက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Be Assertive! (ယုံကြည်ချက်ခိုင်မှာပါစေ။)
Being assertive is knowing when to take “no” for an answer and knowing when to pushalittle bit harder.
ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာခြင်း က ဘယ်အချိန်မှာ ငြင်းဆန်ရမလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားရမလဲ ဆိုတာကို သိရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
FollowaHealthy Diet! (ကျန်းမာတဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုထိန်းသိမ်းပါ။)
Never skip breakfast! This is what will keep your energized in the morning and don’t be afraid to snack during the day!
နံနက်စာကိုဘယ်တော့မှ ကျော်မသွားပါနဲ့။ နံနက်စာစားခြင်းက သင့်ရဲ့နံနက်ခင်းကို အားအင်ပြည့်ဝနေစေတဲ့အပြင် တစ်နေ့တာလုံးမှာလည်း အချိုအချဉ်မုန့်လေးတွေစားဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
Save Money! (ချွေတာစုဆောင်းပါ စုပါ၊)
Save, save, save! If you want to beagirl boss, you’re going to need to save your money! Wait for special promotions like MDS Myanmar’s on going sale:
စုပါ၊ အမြဲမပြတ်စုဆောင်းပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ချင်ရင်တော့ ချွေတာစုဆောင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ MDS Myanmar ရဲ့ on going sale လို special promotion တွေကို စောင့်ပါ။
Set Your Goals. (ပန်းတိုင်တွေကိုသတ်မှတ်ထားပါ။)
Set goals for yourself and you’ll find that with the proper steps and preparation, you’ll soon get there!
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုချမှတ်ထားပြီး သေချာတဲ့ခြေလှမ်းတွေ ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဆိုရင် မကြာခင် ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိမှာပါ။
Start Small. (သေးသေးလေးကနေ စတင်ပါ။)
Instead of “going big,” you might find it more efficient to start small!
ခြေလှမ်းကြီးကြီးစလှမ်းတာထက်စာရင် ခြေလှမ်းသေးသေးစလှမ်းတာက ပိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
Beingagirl boss isn’t easy, but nothing worth doing or being ever is.
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းကလည်း အရာအားလုံးထက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Original article from you queen.com. Some revisions where made.
Tags Fashion, girlboss, MDS, mdsmyanmar, ootdmyanmar, tips
THE MATCHY BAG & SHOES FROM D&C MYANMAR WE RECOMMEND
No Comments on THE MATCHY BAG & SHOES FROM D&C MYANMAR WE RECOMMEND
D&C MYANMAR ရဲ့ အတွဲအစပ်ညီတဲ့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်များ
Withoutadoubt Design and Comfort Myanmar is one of our favorite brands in Myanmar. We have been constantly using their shoes and bags for our styling gigs, shoots and errands because they are so trendy.
Design and Comfort ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ OOTD ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး brand တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယဝင်စရာမရှိပါဘူး။ D&C ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက ခေတ်နဲ့အညီ လှပဆန်းသစ်လွန်းတာကြောင့် OOTD ရဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုတွေ၊ အဝတ်အစားဆင်ယင်ပေးမှုတွေမှာ သူတို့ရဲ့ ဖိနပ်တွေ အိတ်တွေကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
But what we really love about this brand is that its so easy match them with any other D&C Myanmar pieces.
ဒါပေမယ့် ဒီ Brand ကို နှစ်သက်ရတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ ထုတ်ကုန်တွေအချင်းချင်း လွယ်ကူစွာ တွဲစပ်အသုံးအပြုနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
But if you’re too lazy to look around here are our recommended matchy bag and shoes you could rock.
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွဲစပ်ကြည့်ဖို့အချိန်မပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ OOTD က အားလုံးကို စတိုင်ကျစေမယ့် အိတ်နဲ့ဖိနပ်လေးတွေကိုတွဲစပ်ပေးထားပါတယ်။
Shoes @53,000KS Bag @89,000KS
Shoes @56,000KS Bag @89,000KS
Shoes @66,000KS Bag @73,000KS
Shoes @59,000KS Bag @73,000KS
Tags D&CMYANMAR, ootdmyanmar, recommend
3 REASONS TO LOVE SARAMANDA SHOES
No Comments on3REASONS TO LOVE SARAMANDA SHOES
SARAMANDA ဖိနပ်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့ အကြောင်းအရင်းသုံးချက်
Photo credits @hannayuri_sunshine
Saramanda shoes was founded in 1993 by Daniel Young and has become highly reputable for it’s comfort and quality leather footwear in Australia. Saramanda has been also voted “the best new comer” for Comfort leather footwear brand in Australia. And finally Saramanda is in Myanmar! And we listed3reason on why you should love this brand.
ဖိနပ်ကို Daniel Young က ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့အပြင် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ သားရည်ကြောင့် ဂုဏ်သတင်းကြီးမားတဲ့ ဩစတေးလျနိုင်ငံထုတ်ဖိနပ်ဖြစ်ပါတယ်။
They are durable (ကြာရှည်ခံတယ်)
They use innovative manufacturing techniques and quality materials in producing quality soes for men and women. (ဆန်းသစ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတွေနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသားအမျိုးသမီးစီး ဖိနပ်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။)
They are so trendy (ခေတ်မီတယ်)
From sandals, leather shoes, ballet flats name it! They have it and most of their pieces can easily be paired with your outfit. (ခြေညှပ်ဖိနပ်က စ,လို့ လည်သာဖိနပ်တွေ၊ ဘဲလေးဖိနပ်တွေအထိ ရရှိနိုင်ပြီး အများစုကလည်း ဈေးနှုန်းသင့်တင့်လို့ စီးပျော်ပါတယ်။)
So comfortable (သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်)
The hallmark of Saramanda footwear is their use of hand-stitching, polyether and premium grade leather. This allows the best individual fit for the feet and long-lasting comfort. (Saramanda ဖိနပ်ရဲ့အဓိကအမှတ်အသားကတော့ လက်ချုပ်ရိုး၊ polyether နဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့သားရည် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖိနပ်တစ်ရံကို ရရှိနိုင်မယ့်အပြင် သက်တောင့်သက်သာလည်းဖြစ် ကြာရှည်လည်းခံပါတယ်။)
Try them on and feel the difference!
Their shop is located in Junction City and Myanmar Plaza. (Saramanda ဖိနပ်ဆိုင်ကို Junction City နဲ့ Myanmar Plaza မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ FB link ပါ။)
Tags ootdmyanmar, review, reviews, saramanda
HOW TO BE GIRLY?
No Comments on HOW TO BE GIRLY?
Being girly can beachallenge, especially if you areatomboy by nature. You may wonder how you can be more feminine and girly, while still being true to yourself.
သဘာဝအရ ယောက်ျားဆန်နေတဲ့သူတွေအတွက် မိန်းကလေးဆန်ဆန်နေထိုင်ရတာက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းနေထိုင်ရင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လောက်ထိ မိန်းကလေးပီသပြီး မိန်းကလေးဆန်နိုင်မလဲဆိုတာတော့ သိချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။
Dressing Girly (မိန်းကလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ပါ။)
a. Embrace colors like pink, lavender, and red. ( ပန်းရောင်၊ ခရမ်းနုရောင် နဲ့ အနီရောင် စတဲ့အရောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ကြည့်ပါ။)
b. Wear dresses and skirts. (ဂါဝန်လှလှလေးတွေနဲ့ စကတ်လှလှလေးတွေဝတ်ဆင်ပါ။)
c. Look for tops made of lace and velvet. (ဇာ ဒါမှမဟုတ် ကတ္တီပါသားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးတွေဝတ်ဆင်ပါ။)
d. Try wearing heels. (ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးကြည့်ပါ။)
e. Put on jewelry and other accessories (ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့တခြားအလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေဝတ်ဆင်ပါ။)
Looking Girly (မိန်းကလေးဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပြင်ဆင်ပါ။)
a. Have fun with makeup. Start with the basics, like foundation, lip gloss, and eyeshadow. Pick makeup based on your skin tone.
(မိပ်ကပ်ပြင်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ အခြေခံဖြစ်တဲ့ foundation, lip gloss နဲ့ eyeshadow လိမ်းခြယ်ခြင်းကနေ အစပြုပါ။ ကိုယ့်အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အောက်ခံမိပ်ကပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။)
b. Maintain good posture. When you sit or stand, keep your spine straight and your chin up. Roll your shoulders back and your chest forward. Avoid slouching or curving your back.
(ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားရှိနေပါစေ။ မတ်တတ်ရပ်နေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထိုင်နေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောရိုး နဲ့ မေးစေ့ ကို တည့်မတ်အောင်ထားပါ။ ပခုံးကိုအနောက်ပစ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုရှေ့ထုတ်ထားပါ။ ခါးကုန်းခြင်း၊ ကွေးထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။)
c. Have good personal hygiene. (တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပါ။)
Doing Girly Things (မိန်းကလေးဆန်တဲ့အမူအကျင့်တွေပြုမူပါ။)
a. Read up on current fashion and beauty. (.လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့အလှအပရေးရာတွေကို ဖတ်ရှုပါ။)
b. Follow blogs and magazines written by women. (အမျိုးသမီးတွေရေးသားတဲ့ blog တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ဖတ်ရှုပါ။)
c. Go shopping with girlfriends. (မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ။)
Article from wikihow.com and some minor revisions were made.
Tags Fashion, girly, ootdmyanmar
FASHIONISTA OF THE DAY: YIN MOE HTET
No Comments on FASHIONISTA OF THE DAY: YIN MOE HTET
YIN MOE HTET,aPresenter shares her fashion 101
Presenter YIN MOE HTET က သူမရဲ့ fashion 101 အကြောင်း ဝေမျှထားပါတယ်။
Tags Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar, video, youtube
Join 112,096 other followers